March 13, 2020 - Myitter
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် သံသယလူနာအား ဖုံးကွယ်ထားပါက ထောင်ဒဏ် ၆ လ ….
ကို ရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (COVID -19) သံသယလူနာတွေ့လျှင် ချက်ချင်းအကြောင်းမကြားဘဲ ဖုံးကွယ်ထားပါက ၁၉၉၅ ခုနှစ် ကူးစက်ရောဂါများ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးဥပဒေနှင့် ၂၀၁၁ ကူးစက်ရောဂါများ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးဥပဒေအရ ဒဏ်ငွေ ၅၀၀၀၀ (သို့မဟုတ်) ထောင်ဒဏ် (၆) လ ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်ငွေနှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ အရေးယူနိုင်ကြောင်းသိရသည်။ ယနေ့ (မတ်လ […]
ဒီကိစ္စက အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလှတယ်…
အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလှတဲ့ မြန်မာပြည်မှာ ဘာ့ကြောင့် ရောဂါပိုး မတွေ့သေးတာလဲ… မိစ္ဆာ နဲ့ ဝိဇ္ဇာ လွန်ဆွဲပွဲ မြန်မာပြည်မှာ ဘာ့ကြောင့် ရောဂါပိုး မတွေ့သေးတာလဲ…. ဒီကိစ္စက အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလှတယ်… လောက လူသားတွေဟာ အကြောင်းအကျိုး ဖြစ်စဉ်ကို လက်ခံနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ အဖြေပေါ်မှာပါ….. ဖန်ဆင်းရှင် နဲ့ကယ်တင်ရှင် […]
မတျ(၁၃)AlinnMyay(အလငျးမွေ) မနျးရှစေကျတျောဘုရားပှဲကို မတျလ ၁၃ရကျ၊ မနကျပိုငျးမှစတငျပိတျလိုကျပွီဖွဈသညျ။ လကျရှိတှငျ ဘုရားဖူးယာဉျမြားအား ဘုရားပှဲတျောအတှငျးသို့ ဝငျရောကျခှငျ့မပွုပဲ ပုသိမျ-မုံရှာလမျး၊ ရှစေကျတျောဘုရားအဝငျလမျးတှငျ နောကျကွောငျး ပွနျလှတျလကျြရှိသညျ။ မနျးရှစေကျတျောဘုရားပှဲ ပိတျသိမျးလိုကျပွီဖွဈသောကွောငျ့ ဘုရားဖူးမြား ဝငျရောကျမှုခှငျ့မပွုတော့သဖွငျ့ ဆိုငျခနျးတခြို့ဖကျြသိမျပွီး ပွနျသှားကွပွီဖွဈသညျ။ဝဖေုနျးစံ(ပွညျ)#AlinnMyay(အလငျးမွေ)#ပွညျသူ့ကူညီရေး ပွညျသူ့အသံဖျောဆောငျရေး #သတငျးမှနျမီဒီယာ Credit to […]
မနေ့ က ဆရာဝန်မလေး ရဲ့ အလှူခံပိုစ့် တင်ပြီးမကြာ မှီ ဆေးရုံ သို့ သီရိသုဓမ္မသိဂ်ီ တဦးမှ စတင်လှူဒါန်းပါပြီ ….
မနေ့ က ဆရာဝန်မလေးရဲ့ အလှူခံပိုစ့် တင်ပြီးမကြာမှီ သီရိသုဓမ္မသိဂ်ီ တဦးမှ ၂၅သိန်းတန် စက်တလုံး လှူဒါန်းလိုက်ပါပြီနော်။ သာဓုပါဗျာ တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ ဆေးရုံဆေးခန်းတွေမှာ လှူဒါန်းပေးတဲ့အတွက် အရမ်းအကျိုးရှိစေပါတယ်နော်။ နောက်ထပ် သီရိသုဓမ္မ ဘွဲ့ရ သူဌေးတွေသူကြွယ်တွေ ဆက်လက်လှူဒါန်းမယ်လို့ မျှော်လင့်လျှက် ယခု အလှူရှင် ဒေါ်မိုးသီတာရွှေကို ဂုဏ်ယူစွာ […]
မနေ့က ရန်ကုန်သင်္ကန်း ကျွန်းမီးလောင်မှု မှာ အခက်ခဲတွေ့ခဲ့ကြသော မိဘပြည်သူတွေကို
အမှန်တကယ်အကူအညီလိုအပ်နေသူများကို စေတနာရှေ့ထား ထပ်မံလှူဒါန်းလိုက်တဲ့ မော်ဒယ် Sinon မနေ့က ရန်ကုန်သင်္ကန်းကျွန်းမီးလောင်မှု မှာ အခက်ခဲတွေ့ခဲ့ကြသောမိဘပြည်သူတွေကိုကျတော်က ဒီနေ့မှာ အရသာရှိလှတဲ့ မုန့်ဟင်းခါးနဲ့ အချို ရည်တွေကို စတုဒီသာကျွေးမွေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ကျတော့်ရဲ့ရိုးရှင်းလှတဲ့ အလှ ဒါန မှာ ကျတော့် အချစ်တွေအားလုံး ပြုံး ပျော်ရွှင်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျ အားလုံးကိုချစ်တယ် […]
အဝေးပြေးလမ်းပေါ်က အမည်မသိ ညီအစ်မ (၂)ဦးနှင့် ၀ပ်ရှော့ဆရာ တို့ရဲ့ လေးစားဖွယ်လုပ်ရပ်
အဝေးပြေးလမ်းပေါ်က အမည်မသိ ညီအစ်မ (၂)ဦးနှင့် ၀ပ်ရှော့ဆရာ တို့ရဲ့ လေးစားဖွယ်လုပ်ရပ် ရိုငျးပငျကူညီစိတျဓာတျရှိသောရစေကွို မွို့ မှ ညီအဈမ နှဈယောကျ နှငျ့စကျဆရာ ကိုရနျလငျးအောငျ တို့၏မှနျမွတျသောစတေနာအားမှတျတမျးတငျးဂုဏျပွုအပျပါသညျ။ 👈 မုံရှာမွို့ မှ ပုဂံ သို့ ပွနျလာစဥျ ရစေကွိုမွို့ အဝငျ အနီးအရောကျတှငျ ကားစီယာတိုငျမှာ […]